Homeसमाचारअष्ट्रेलियामा वर्षा ! आगलागी भएको क्षेत्रमा राहत महसूस
January 16, 2020 Spnews समाचार Comments Off on अष्ट्रेलियामा वर्षा ! आगलागी भएको क्षेत्रमा राहत महसूस
अष्ट्रेलियामा लामो समयदेखि आगलागी भएको क्षेत्रमा वर्षा भएको छ । देशको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने त्यस क्षेत्रमा बिहीबार वर्षा भएको र राहत महसूस गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । अहिलेसम्म नै नभएको ठूलो आगलागीको घ’टनामा परी कम्तीमा २८ जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ भने लाखौ जनावर पनि ज’लेर म’रेका छन् ।
वर्ष कति धेरै समय पर्छ र कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुराले आगलागी नियन्त्रण हुन्छ की हुदैन भन्ने निर्धारण हुने उनीहरुले बताएका छन् । आगलागी हुनुभन्दा अगाडीसम्म दर्जनौ ठाँउमा आगलागी भइरहेको विवरण अग्नी नियन्त्रण सेवाका अधिकारीहरुले दिएका थिए । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले पनि जलिरहेको जंगलमा वर्षा भएको भिडियो र फोटोहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका छन् ।